नेप्से विश्लेषण | गृहपृष्ठ
असार १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार दिनभरिको कारोबारमा नेप्से शून्य दशमलव ९६ अंकले वृद्धि भएको छ । १ हजार २६० दशम...
असार १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा ४ दशमलव २२ अंक बढेर १ हजार २६४ दशमलव ३३ वि...
असार १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से कारोबार भएको एक घण्टामा शून्य दशमलव ४० अंक घटेर १ हजार २५९ दशमलव ७१ वि...
असार ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से परिसूचक ५ दशमलव ७५ अंक बढेर १ हजार २६० दशमलव १० विन्दुमा बन्द भएको छ । १...
०.२५ अंक घट्यो नेप्से (१ बजेको अपडेट)
असार ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा शून्य दशमलव २५ अंक (०.०२ प्रतिशत) घटेर १ हजा...
१२५५.६८ विन्दुमा नेप्से, १० करोडको शेयर कारोबार (१२ बजेको अपडेट)
असार ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार कारोबार भएको १ घण्टामा नेप्से परिसूचक १ हजार २ सय ५५ दशमलव ६८ विन्दुमा रहेको छ...
१० अंकले नेप्से घट्दा कारोबार रकममा सुधार, अझै सस्तोमा शेयर किन्ने लगानीकर्ताको दाउ, कुन कम्पनीको शेयर मूल्यमा लाग्यो सर्किट ?
असार ८, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो दिन आइतवार नेप्से १० दशमलव शून्य १ अंक घटेर १ हजार २५४ दशमलव ३५ विन्दुमा...
on: June 25, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
असार १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार दिनभरिको कारोबारमा नेप्से शून्य दशमलव ९६ अंकले वृद्धि भएको छ । १ हजार २६० दशमलव २३ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक दोस्रो घण्टामा १ हजार २६४ दशमलव ५२ विन्दुसम्म...	बिस्तृतमा
on: June 25, 2019 नेप्से विश्लेषण, लगानी
असार १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा ४ दशमलव २२ अंक बढेर १ हजार २६४ दशमलव ३३ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २६० दशमलव २३ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक आधा घण्टामा बढ...	बिस्तृतमा
असार १०, काठमाडौं (अस) । मंगलवार नेप्से कारोबार भएको एक घण्टामा शून्य दशमलव ४० अंक घटेर १ हजार २५९ दशमलव ७१ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २६० दशमलव २३ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक आधा घण्टामा बढ...	बिस्तृतमा
on: June 24, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
असार ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से परिसूचक ५ दशमलव ७५ अंक बढेर १ हजार २६० दशमलव १० विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार २५४ दशमलव ६८ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबार शुरु भएको केही अवधिमा उका...	बिस्तृतमा
on: June 24, 2019 नेप्से विश्लेषण, लगानी
असार ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा शून्य दशमलव २५ अंक (०.०२ प्रतिशत) घटेर १ हजार २५४ दशमलव १० विन्दुमा पुगेको छ । सो समयसम्मको कारोबार अवधिमा १ सय ४५ कम्पनीको...	बिस्तृतमा
असार ९, काठमाडौं (अस) । सोमवार कारोबार भएको १ घण्टामा नेप्से परिसूचक १ हजार २ सय ५५ दशमलव ६८ विन्दुमा रहेको छ । सो अवधिमा १ सय १० कम्पनीको रू. १० करोड बराबरको शेयर खरीद विक्री भएको छ । सबैभन...	बिस्तृतमा
on: June 23, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
असार ८, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो दिन आइतवार नेप्से १० दशमलव शून्य १ अंक घटेर १ हजार २५४ दशमलव ३५ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार २६४ दशमलव ७६ विन्दुबाट शुरु भएको बजार १५ मिनेटमा १ हजार २६५...	बिस्तृतमा
७.९५ अंकले घटेको बजारमा दुई लघुवित्तको शेयरमा सर्किट (१ बजेको अपडेट)
on: June 23, 2019 नेप्से विश्लेषण, लगानी
असार ८, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो दिन नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टाको अवधिमा ७ दशमलव ९५ अंकले घटेर १ हजार २५६ दशमलव ४१ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार शुरु भएको केहि समयपछि घटेको बजार यस अ...	बिस्तृतमा
आइतवार पहिलो घण्टामा ४.७७ अंकले घट्यो नेप्से (१२ बजेको अपडेट)
असार ८, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो दिन नेप्से कारोबार भएको पहिलोे एक घण्टाको अवधिमा ४ दशमलव ७७ अंकले घटेर १ हजार २५९ दशमलव ५९ विन्दुमा आइपुगेको छ । १ हजार २६४ दशमलव ७६ विन्दुबाट शुरु भएको...	बिस्तृतमा
नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण (आइतवार, ८ असार २०७६)
बजार सारांश (असार ५, २०७६) प्रवृत्ति विश्लेषण गत गएको साता नेप्से परिसूचक ५ दशमलव १९ अंक (शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत) घटेर १२६४ दशमलव ३६ मा बन्द भएको छ । गत साता नेप्से परिसूचकले ५० दिनको मुभिङ...	बिस्तृतमा